उमा आलेमगर पोखरा, ०३ पुस नेपाली टेलिश्रृखलाको क्षेत्रमा विगत ३२ वर्ष देखि निरन्तर लगानशी सक्रिय हुदै हास्यब्याङ्ग कलाकारका रुपमा आफुलाई देश र विदेशका दर्शक माझ चिनाउन सफल भएका कलाकार सुरेन्द्र के.सी जसलाई सबै नेपालीले “मूलाको साग” का रुपमा चिन्ने गरेकाछन् । नेपाली टेलिश्रृखलामा विशेष गरि दर्शकहरुले हास्यब्याङ्ग कालाकारलाई रुचाउने गर्दछन्…
उमा आलेमगर पोखरा, १७ असोज सामान्यतया हामीले आफ्नो जन्म दिन कसरी मनाउँछौँ ? अवश्य पनि साथीभाई वा परिवारसँग केक काटेर, रमाईलो गरेर वा कहीँ घुम्न गएर मनाउने गर्छौँ । तर यहाँ यस्ता व्यक्तित्व पनि छन् जस्ले आफ्नो जन्म दिनमा दिनदुखीलाई सहयोग गर्छन् । हो, कलाकार तथा नायिका रजनी गुरुङले मंगलबार…
मानिसहरूको खुसीमा खुसी हुन्छु - अमृत गुरुङ ( नेपथ्य )
कृष्ण भट्टराई लोकलयमा आधारित रक गीत गाएर हरेक उमेरका श्रोताको मन जित्न सफल सांगीतिक समूह हो– नेपथ्य । यसै वर्ष स्थापनाको २५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको यो सांगीतिक समूहले नेपालका प्राय: सबै जिल्ला पुगेर आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुति दिइसकेको छ । नेपथ्यले विदेशका ४० भन्दा बढी सहरमा आफ्ना लोकप्रिय…
- राजकुमार बानियाँ तस्बिर : रवि मानन्धर कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पछिल्तिर केही भुइँतले भवन छन् । त्यहीँ एउटा हलजस्तो कोठा छ । बाहिर तीनवटा नेमप्लेट टाँगिएका छन् । दुई उप–संगीत निर्देशक र एक वाद्य संगीत उप–निर्देशकको । सबै स्ट्याटस ‘भित्र’ । ढोकानिरको सोफामा एक्लै भेटिन्छिन्, सुकमित गुरुङ, ५८ । तीनतिर…
खुश्बु भइन् मिस लुम्बिनी
पुजा पन्थी । वुटवल–१७,फागुन ड्रिम इभेन्ट एण्ड इन्टरटेन्मेन्ट बुटवलको आयोजनामा भएको एइ ग्लोबल मिस लुम्बिनी २०७३ को ताज खुश्बु क्षेत्रीले पहिरेकी छन । आइतबार राती बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको हलमा सम्पन्न फाइनलमा अरू १९ जनालाई पछि पार्दै न्यू होराइजनमा अध्ययनरत भैरहवाकी क्षेत्री मिस लुम्बिनी २०७३ बन्न सफल भइन । यस्तै…
चर्चित होईन लोकप्रिय कलाकार बन्छु : एन्जिला रेग्मी
एन्जिला रेग्मी रुपन्देही कै प्रतिभा जो ३ दर्जन बढि गित स‍गितमा अाफ्नाे स्वर दिइसकेकि छन् । अाजभाेलि अत्यन्तै बेयस्त बन्न थालेकि छन् । उनै स‌ग jukson.com ले तयार पारेकाे याे…
गायक राज कुमार गोस्वामीले मीस नेपाल सृष्टिलाई नौं तले घर छ भन्दै पुराए काडाँघारी
गायक राज कुमार गोस्वामीको “काडाँघारी” गीत को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । किरण भण्डारीको शब्द,संगीत तथा एरेन्ज रहेको सार्बजनिक गीतमा गायक …
कार्तिक १, २०७३- गएको शुक्रबारदेखि प्रदर्शन भएको सनी लियोनी अभिनीत ‘बेइमान लभ’ ले निकै आलोचना खेपिरहेको छ । झुर अभिनय र गन्जागोल प्लटका कारण फिल्म गतिलो नभएको समीक्षा आइरहेका छन् । सनीको हृष्टपुष्ट जिउडाल देखाउनमै फिल्म केन्द्रित भएको बताइएको छ । हुन त यसअघिका फिल्ममा पनि सन्नीलाई ‘सो पिस’ बनाइएको…
राज बल्लभ कोइराला सँग दाह्री गन्थन
राजसँग दाह्री गन्थन राजबल्लभ कोइराला, अभिनेता दाह्री त सबै फुलेछ, कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ? हा हा....सबै त होइन, चिउँडोमा मात्र फुलेको हो तर मिलेको स्टाइलमा फुलेको छ भन्छन् साथीहरू । सेतै दाह्री देख्नेहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ? फुलेको जस्तो देखिँदैन, फुलाएको जस्तो देखिन्छ भन्नेहरू पनि छन्, हेराइ हो । …